Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ကချင်သတင်း
at 3/09/2015 02:59:00 AM
၄-၆.၃.၂၀၁၅ အတွင်း တရုပ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ၊ယူနန်ပြည်နယ်၊ မန်ရှီ မြို့တော်တွင် ယူနန်ပြည်နေကချင်လူမျိုးများမှ ကချင်ရိုးရာမနောင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဤ မနောင်ပွဲ၌ ယူနန်ပြည်အခြေစိုက်
ကချင်တိုင်းရင်းသားရိုးရာစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှလူငယ်အယောက် (၂၀၀) ပါဝင်ဆက်နွဲခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့ဥက္ကဌ မှ သတင်းပေးပို့လာပါသည်။
ရင်းမြစ်.Myu Tsaw Kasa
‪#‎မနောင်ပွဲ‬ သည်ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် တချိန်တည်းတပြိုင်တည်းလူပေါင်းထောင်သောင်းချီပြီးပါဝင်ကနိုင်သည့် ကချင်ရိုးရာ အက ပွဲဖြစ်သည်။ ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၆) မျိုး၏ ဝတ်စုံများဖြင့်ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်သလို. ရိုးရာဝတ်စုံမဟုတ်သည့်ဝတ်စုံများနှင့်လဲ ပါဝင်နိုင်သည်။ သို့သော်အများပြည်သူပါဝင်နိုင်သည့်အချိန်အခါကပွဲ၌သာလျင်ဖြစ်သည်။
Padang Manau. > အောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်မနောင်ပွဲ
Sut Manau >စီပွားဘဏ္ဍာ တိုးပွား အထိမ်းအမှတ်
N lung Nnan Sha Manau>ကောက်သစ်စားပွဲ
Ninggawn Shadip Manau
‪#‎မနောင်အကပွဲသည်ကချင်လူမျိုးများ‬ (၆) မျိုး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု သွေးစည်းမှု၊ ဥမကွဲသိုက်မပျက်တမြေတည်းနေတရေတည်းသောက်ကာ မဂျွယ်ရှိန်ရာ တောင်မှဆင်းသက်လာသော နေမျိုးနွယ်များဖြစ်ကြောင်းကို ပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။
‪#‎မနောင်ပွဲပုံဖော်ရာတွင်‬ ဦးဆောင်သူများမှကကွက်ကို ဦးစီးပုံဖော်သွားကြပြီး၎င်း၏ နောက်မှ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါကြရသည်။ စက်ဝိုင်းကွင်းလယ်တည့်၂ တွင် မနောင်တိုင်များကို စိုက်ထူထားရှိပြီး ၄င်းကိုဗဟိုပြုလှည့်ပတ်ကရခြင်းဖြစ်သည်။...
ကကွက် ပုံ သဏ္ဍာန်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိသည်။
မူလဇစ်မြစ်မနောင်အကဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာအလွန်ရှေးကျသည်။BC ခေတ်ကတည်းမှ စတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ငှက်များထံမှသင်ယူနိုင်ခဲ့သည်ဟုယနေ့ကချင်သမိုင်းလေ့လာကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်။ ပိုမိုသိလိုသူများ Google တွင် လည်းလက်လှမ်းမှီသလောက်သိရှိနိုင်သည်.Kachin Manau Festival..or Kachin Manau. ဟု ရှာဖွေနိုင်သည်။
‪#‎Col‬ Victor Aung
မှတ်ချက်။ ။ တရုပ်နိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားများကို မဖိနှိပ်
အာဏာရပါတီနှင့်တရုပ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သောအစိုးရမှာကွန်မြူနစ်ပါတီဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်ဘာသာအယူဝါဒကိုမျှမဖိနှိပ်။လွပ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပမာ ဘုရားကျောင်းတဆောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းဆောက်လိုပါက မိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမူးထံတင်ပြပြီးလျင် ကျသင့်ငွေတဝက်ခန့်ကိုအစိုးရမှထောက်ပံ့သလိုရိုးရာပွဲများအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရပြီးပါက ထောာက်ပံ့ငွေများ ၃ ပုံ ၂ပုံ ခန့်ရရှိသည်။
ထို့ကြောင့်တရုပ်နိုင်ငံတွင် အစိုးရကိုတော်လှန်မည့်သူ မကျေနပ်သူများမရှိ။ လုံးဝမရှိ။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ကွာခြားချက်မှာ ဆီ နှင့် ရေသို့မဟုတ်. မိုးနှင့် မြေ ဖြစ်သည်။ မြေ မှာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုအမည်ခံစစ်အစိုးရ၊ မိုးမှာတရုပ်။ ရေမှာမြန်မာစစ်အစိုးရ၊ ဆီမှာ တရုပ်အစိုးရ ဖြစ်သည်။
တရုပ်ကို အားမပေးသော်ငြားခြားနားချက်များသည်အမှန်ရှိနေ ၊ဖြစ်နေ သည်။